Ciidamada Ethiopia oo dib u qabsaday magaalo muhiim ah - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada Ethiopia oo dib u qabsaday magaalo muhiim ah
Ciidamada Ethiopia oo dib u qabsaday magaalo muhiim ah
Lalibela (Caasimada Online) – Ciidamada Ethiopia ayaa mar kale dib u qabsaday magaalo diimeedka muhiimka ah ee Lalibela, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda oo soo bandhigtay sawirro muujinaya ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo booqanaya halkaas.
Ma cadda xilliga ay ciidamada dowladda dib u qabsadeen magaalada oo muhiim u ah malaayin qof aaminsan diinta Orthodox Kirishtanka, sidoo kalena marar badan isu bedeshay gacmaha dowladda iyo mucaaradka TPLF.
Ciidamada Tigray-ga ayaa magaaladan qabsaday bishii August hase yeeshee dowladda ayaa ka riixday bilowgii December ayada oo qaaday weerar dib u celiyey TPLF dhowr boqol oo km.
Axaddii 12-kii December, dadka deegaanka ayaa kusoo waramay in Tigray-ga ay dib ula wareegeen magaalada kadib markii ay ka baxeen militari dowladda iyo xulafadooda.
Dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale Sabtidii sheegatay in ciidamadeeda ay dib ula wareegeen magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Axmaarada oo ay gacanta ku hayeen Tigray-ga.